Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif oo Baledweyne ku geeriyooday – STAR FM SOMALIA
Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif oo Baledweyne ku geeriyooday
Allaha unaxariistee waxaa maanta Magaalada Baledweyne ku geeriyooday Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif oo ka mid ahaa Odayaasha Dhaqanka Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan.
Ugaas C/raxmaan oo fadhiyay Shirka Samadoon 2 oo ka socday Magaalada Baledweyne, ayaa mar qura xanuun ku soo booday, kadibna Isbitaalka Magaalada loola cararay.
Ugaaska Markii la geeyay Isbitaalka ayaa Dhaqaatiirta waxa ay bilaabeen inay la tacaalaan xaaladiisa caafimaad si ay u daweeyaan, hayeeshe kuma aysan guuleysan oo Ugaas waa uu geeriyooday.
Allaha u naxariistee Ugaas C/raxmaan ayaa ku howlanaa xalinta dagaal beeleedyada ka socda Gobolka Hiiraan oo Shirka Samadoon 2 isaga ayaa qaban qaabadiisa lahaa, wuxuuna ahaa Shir Dib u heshiisiin ah.
Dadka Reer Hiiraan ayaa aad uga naxay geerida Naxdinta leh ee Ugaas C/raxmaan Saaka ku timid.
Ugaas C/raxmaan ayaa aad loogu xasuusanayaa doorka nabadeynta Gobolka Hiiraan iyo kaalinti muuqatay ee uu ku lahaa.